Nin ka tirsan Kooxda Al-shabaab oo Xukun dil ah lagu riday | KEYDMEDIA ONLINE
Nin ka tirsan Kooxda Al-shabaab oo Xukun dil ah lagu riday
Maxkamad ku taal magaalada Kismaayo ayaa xukun dil ah ku ridday sarkaal ka tirsanaa Kooxda Al-Shabaab oo horay fal argagaxiso uga geystay Hotel Madina Ex.Cascasey Hotel.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xukunkan dilka ah ay ku fulisay maxkamadda ninkan ka tirsanaa Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo eedeeyay in uu qeyb ka ahaa raggii fuliyay weerarkii Juulaay 2019 ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan Madiina Hotel (Ex-Cascasey Hotel) kaasoo ay dad badani ku naf waayeen.
Eedeysanaha ayaa Maxkamadda la hor keenay isagoo loo hoysto in uu kamid ahaa 4-tii nin ee fulisay weerarka, waxaana Maxkamadda la hor keenay cadeeymo muujinayay in eedeysanuhu uu qeyb ka ahaa falka ay dadka badani ku dhinteen.
Deeqow Caliyow Kuusow oo kasoo muuqday Maxkamadda 13-10-2020 ayaa Maxkamadda ka hor qirtay falkii Argagaxisanimo ee lagu soo eedeeyay, wuxuuna sheegay in uu qeyb ka ahaa dadkii geystay falka lagu laayay dad aan waxba galabsan, waxa uuna codsaday in la cafiyo, iyadoo ugu dambeyntiina Maxkamaddu ku ridday xukun Dil Toogasho ah.
Weerarkii ka dhacay Ex-Cascasey waxaa ku dhintay 20 qof in kabadan 50 kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan, waxaana weerarkaas ku dhintay dad badan oo caana kuwaasoo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale wariyayaal caana.
Xildhibaan hore Maxamed Ismaaciil Shuuriye ayaa kamid ahaa dadkii goobta ku naf waayay, sidoo kale wariye Hodan Naaleeye iyo wasiirkii qabay ayaa goobta ku geeriyooday, Fariid Jaamac oo ahaa siyaasi iyo ganacsade reer Kismaayo ah ayaa isna kamid ahaa dadkii ku dhintay Qaraxii Madiina Hotel ee magaalada Kismaayo.